Inqubo Yokufudumeza Ucingo lwentambo yethusi, ucingo lwensimbi, ucingo lwethusi, njll
Ekukhiqizweni kwensimbi yensimbi, ucingo lwethusi, ucingo lwethusi, nensimbi noma Ukushisa izinduku zentwasahlobo zethusi, kusetshenziswa izinqubo ezahlukahlukene zokwelashwa kokushisa, njengokudweba ngocingo, ukufuthelana ngemuva kokukhiqizwa, kucisha ukwelashwa kokushisa ngezidingo ezikhethekile, ukufakwa kwe-induction ngaphambi kokusetshenziswa njengempahla eluhlaza, njll. Kunezicelo eziningi njengamanje mayelana nokushisa kwe-inthanethi ngejubane elisheshayo, uhla lokushisa oluhlukile, ukukhishwa kwamandla okunembile, nokulawulwa kokushisa kuzintambo ezincane zobubanzi; ngakho-ke, indlela yokushisa ngokunemba kufanele. Ukuba nenzuzo yokusebenza okuphezulu kwe-automation (kufaka phakathi ukubekeka kwesikhathi okuguqukayo, izinga lokushisa, amandla), idivayisi yokushisa yokungeniswa ye-HLQ itholakala ukuthi ilungele kakhulu ukuqeda ukwelashwa kokushisa kwezintambo nezintambo. Iyakwazi ukwamukela ukulawulwa okukude kwesiqalo / sokumisa, ukuqedela ukulungiswa kwamandla, ukusebenza amahora angama-24 / usuku, ukwenza ukukhishwa kwamandla okusheshayo, nokwenza ukucisha umshini okusheshayo ngokuya ngesiginali yokulawula ukushisa, imikhiqizo yethu yokushisa yokungeniswa ingahlangabezana kalula nezidingo ezahlukahlukene zocingo lwamanje nokushisa kwekhebula.
Iyini intambo yokungeniswa nokushisa kwekhebula?
I-HLQ Induction Equipment Co inikela ngezixazululo zezicelo eziningi ezivela ezintanjeni zesakhiwo zensimbi nezingenayo, ikhebula lethusi ne-aluminium kanye nabaqhubi ekukhiqizeni i-fiber optic. Izicelo zibanzi kakhulu kufaka phakathi, kepha kungagcini lapho, ukwakha, ukwakha, ukushisa ukushisa, ukufaka i-galvanizing, ukumboza, ukudweba njll emazingeni okushisa kusuka ku-10's degrees kuye ngaphezu kwama-degree ayi-1,500.
Izinhlelo zingasetshenziswa njengesixazululo sakho esiphelele sokushisa noma njengesikhuthazi sokwenza ngcono ukukhiqizwa kwesithando somlilo esivele sikhona ngokwenza njengesiqalo sokuqala. Izixazululo zethu zokufudumeza ngaphakathi zaziwa ngokuxinana kwazo, ukukhiqiza nokusebenza kwazo. Ngenkathi sinikezela ngezixazululo eziningi, eziningi zenzelwe ukuhlangabezana nezidingo zakho ezithile. Izinhlelo zokuthuthukisa ezilungiselelwe izidingo zakho ngezixazululo ezenziwe ngezifiso okukhethekile kwe-HLQ Induction Equipment.
Izicelo ezijwayelekile zifaka:
Ukomisa iposi yokuhlanza noma ukususa amanzi noma i-solvent kuzingubo
Ukuphulukiswa kokumbozwa okusamanzi noma okuyi-powder. Ukuhlinzeka ngamandla wesibopho esiphakeme nokuqedwa kwendawo
Ukwahlukaniswa kwensimbi yensimbi
Ukushisa kwangaphambi kokukhishwa kwe-polymer nokwe-metallic
Ukwelashwa ngokushisa kufaka phakathi: ukukhululeka kwengcindezi, ukufuthelana, ukunama, ukuqinisa okukhanyayo, ukuqina, ukwenza amalungelo obunikazi njll.
Pre-Ukushisa for ezishisayo-ukwakha noma UKWAKHA, ikakhulukazi okubaluleke for ama-alloys sebhithi
Ukushisa Ukushisa isetshenziselwa ukushisa, ukufudumeza okuthunyelwe noma ukufakwa kwentambo yensimbi kanye nokubopha / ukuvala ukuvikela noma ukuvikela ngaphakathi kwemikhiqizo ehlukahlukene yekhebula. Izicelo zokuqala ukushisa zingafaka ukushisa kwentambo ngaphambi kokuyidonsela phansi noma ukukhipha. Ukushisa okuthunyelwe kungabandakanya izinqubo ezinjengokubopha, ukuvuthisa, ukwelapha noma ukumisa upende, izinto zokunamathisela noma izinto zokuvikela. Ngaphezu kokunikeza ukushisa okunembile kanye nesivinini somugqa osheshayo, amandla wokukhipha wokunikezwa kwamandla okushisa we-induction angalawulwa ngejubane lomugqa lohlelo ezimweni eziningi. I-HLQ isabalalisa izimpahla ezinhlobonhlobo zamandla okushisa angenayo angasetshenziselwa lezi zinqubo.
IZIMPAHLA ZOKUSHINTSHA IZINSIZA ZOKUSHISA
I-HLQ UHF ne-MF Series ye-Induction Heating Systems inikezela ngamaza anhlobonhlobo ngamandla kusuka ku-3.0 kuye ku-500kW, ahambelana nokusebenza kwezobuchwepheshe ezinhlobonhlobo zezicelo zamakhasimende. Idizayinelwe i-tank capacitance eguquguqukayo kanye ne-multi-tap output transformer, ama-HLQ Induction Heating Systems aguquguqukayo futhi athembekile ukuhlangabezana nezimo zokukhiqiza ezifunwa ngu ukufakwa kwentambo kwe-induction nemishini yokushisa ikhebula.
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi i-annialing yethusi yethusi, ukunxusa ucingo lwensimbi, ukunxusa ucingo, ikhebula lokushisa lokungeniswa, induction ithusi lokushisa, ukufakwa kwekhebula lokushisa kwekhebula, induction ithusi lethusi, lokungeniswa kwensimbi yensimbi yokushisa, induction wire heater, ukufakwa kwentambo kwe-induction, isifudumezi sensimbi, ukushisa kwentambo, Isixazululo sokushisa se-wire induction Imeyili kwemikhumbi